ဂျူလီယာ Vignali နှင့် Kad Merad: သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းအပေါ်ပြန်လာ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "ဂျူလီယာ Vignali နှင့် Kad Merad: သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းအပေါ်ပြန်လာ
ဂျူလီယာ Vignali နှင့် Kad Merad: သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းအပေါ်ပြန်လာ
ရာသီသစ်နေစဉ် အကောင်းဆုံး pastry ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 11 ပိုမိုနီးကပ်စွာကမ်းလှမ်းမှုများအကြားလှပချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကိုပြန်သွားဖို့ M6 အပေါ်ကစတင်ခဲ့သည် ဂျူလီယာ Vignaliအဆိုပါအစီအစဉ်၏, Host က, Kad Merad။ ဒါဟာနှစ်ခုသရုပ်ဆောင်တွေကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမည်ကြောင်း 2014 ဖြစ်ပါတယ်။ ၏ကြယ်ပွင့် တုတ်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ၏အစား, အတော်လေးဂျူလီယာ Vignali အားဖြင့်တင်ပြ, သင်ဖို့အစီအစဉ်ကိုကို C ၏ဧည့်သည်ဖြစ်ပြီးအန်း-ဆိုဖီ Lapix.
"ငါသည်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ချဉ်းကပ်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ရှိပါတယ်။ ငါကဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံကိုအပြီးမပြော ", သူရှိခဲ့ ဘန်ဝစ်အင်တင်နာနောက်ဆုံးဖေဖော်ဝါရီလကရှင်းပြခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. နှစ်ခုချစ်သူများနှင့်သူတို့၏အချစ်ဘဝအကြောင်းကိုတော်တော်သတိပညာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှစ်နှစ်ပြီးနောက်, 2016 အတွက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတရားဝငျမှတျပုံတငျခဲ့ကြသဖြင့်, နှစ်လုံးကိုလက်ငင်းသာအလွန်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ "ကျနော်တို့ကသေချာပေါက်ဒီဇာတ်လမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြမရကြသည်မဟုတ်။ ကြှနျုပျတို့သညျ ", သားသမီးတစ်မိသားစုအသက်ကို, Kad Merad Added ။
သူမ၏စိတျအပိုငျးအဘို့, ဂျူလီယာ Vignali အနည်းငယ်ကောင်လေး၏ပြီးသားမိခင်, အပ်နှင်းခဲ့သည် Gala ထိုသူမနောက်တဖန်မိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာချင်ခဲ့ပါဘူး : Kad Merad တစ်ယခင်ဆက်ဆံရေးမျိုးကနေသားလည်းအဖေနှင့်အတူ "အဘယ်သူမျှမ, ငါ့မိသားစုကြီးထွားသွားမပေးပါ။ ငါတို့စပ်ကြား, ငါတို့မကြာခင်အနှစ် 100 ။ ကျနော်တို့အဟောင်းစုံတွဲသော်လည်း, ငါတို့သည်ငါတို့၏ဦးခေါင်းအတွက်လူငယ်စုံတွဲဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒီတော့၏မတ်ေတာဖြစ်စေသောအသစ်လူငယ်၏အားသာချက်ကိုယူပါစေ, ဒါပေမယ့်သူကအသစ်တစ်ခုမွေးဖွားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်အဘယ်သူမျှမကြေငြာချက် ".
ဂျူလီယာ Vignali နှင့် Kad Merad: ၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းအပေါ်ပြန်လာ
ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်၏အနှစ်သက်ဆုံး: သူမကိတ်, Camilla သို့မဟုတ် Meghan မှကြိုက်နှစ်သက်သည်ကြောင်းဘုရင်မကြီး?
စာရာသည်ဖာဂူဆန်သူမကထောင်ထဲမှာပြီးနောက်သူနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကကနျြရပါသလဲ - ကလူ
#sextouemcasa: Novidades da Netflix နဲ့အီး outras စည်းမသန်စွမ်း assistir em CASA - ဗွီဒီယို
အဆိုပါ pakgne - ဗီဒီယိုကိုဤနေရာတွင် IS
Bayam Sellam Moustik Karismatik (Micro နဲ့လမ်းဘေး) - ဗွီဒီယိုကိုဤနေရာတွင် IS
အကြံပြုချက်များ: 25 လွယ်ကူအကြံပြုချက်များ Beginner တွေအတွက်စည်း || Draw နှင့်ဆေးသုတ်ပို့ချချက်နှင့်အကြံပြုချက်များ
ထိုအခါဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ် ... - လူတွေ
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,704